Geography for Kids: Resources maka ndị na-eto eto na-ese foto
Nyere umuaka aka imuta ihe omumu ya na akuko ndi enyi
My saịtị gụnyere nnukwu nnakọta nke ihe onwunwe ndị kwesịrị ekwesị maka ụmụaka. Ihe omumu a maka umu akwukwo nyere m ohere inweta uzo omumu m maka umuaka.
Dika nmalite, nkowa nke geography nyere otutu nghota banyere ala uwa na njikọ nke ihe nile n'uwa m. N'etiti ndị ọzọ, ị ga-ahụ ozi gbasara isiokwu ndị a:
Nkọwa nke "ala ala."
Akụkọ banyere ala.
Alaka dị iche iche na nkewa nke ala.
Ozi gbasara ịmụ banyere ọdịdị ala ma na-arụ ọrụ dị ka onye na-ese foto.
Na-akwadebe maka Geography Bee
The National Geography Bee bụ maka ụmụaka na nke anọ site na ọkwa asatọ. Ụmụaka nwere ike ịmụta banyere Bee na otu esi akwadebe. Ọ bụrụ na ụlọ akwụkwọ gị bụ otu n'ime 1,000+ na-ekere òkè na Geography Bee, ozi na njikọ dị na isiokwu a nwere ike inyere ụmụ akwụkwọ gị aka ịkwadebe.
Ihe nile gbasara ihe omumu ala
Isiokwu a na-akụziri ụmụaka ụfọdụ n'ime isi ihe dị mkpa nke ọdịdị ala ma zaa ajụjụ dịka ndị a:
Kedu ka ala ala si dị iche na nkà mmụta sayensị?
Kedu ihe ndị ọkà mmụta ihe nkiri na-eme?
Kedu otu onye si aghọ onye na-ese foto?
Akwụkwọ a maka ụmụaka na-agụnye ndepụta nke ihe ọchị maka ụwa ụwa dị ka ndị a:
Ogo nke ụwa.
Ọnụ ọgụgụ mba dị na mbara ụwa anyị.
Ihe kachasị elu na nke kachasị elu n'elu ala.
Oge nke ụwa.
Oge usoro iheomume nke Geographic History
Ụmụaka ga-achọta usoro iheomume nke ihe omume dị mkpa n'ụwa nke ọdịdị ala bara uru. Ozi gbasara mgbasa nke map ndị mbụ na Mesopotemia oge ochie iji gbanwee ụwa ụwa na narị afọ nke 21.
Chee na ị bụ onye ọkachamara n'ịdị elu?
Ọ bụ ezie na ajụjụ a nwere ike ịbụ ihe ịma aka nye ọtụtụ ụmụaka, ezigbo ebe a ga-enwe obi ụtọ maka ihe ịma aka ahụ! Ụmụaka na ndị okenye ga-enyocha omimi nke ihe omuma ala ha na ajụjụ iri na ise a.
Ndị isi obodo US
Nke a bụ ezigbo akụnụba maka ụmụaka ndị kwesiri iburu isi obodo ala n'isi ụlọ akwụkwọ ha. Site na Juneau (Alaska) ruo Augusta (Maine), ị ga-ahụ isi obodo tinyere ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ, akwụkwọ, na ego maka obodo ọ bụla.
Isi obodo nke mba ọ bụla
Ndepụta a bụ ihe dị mma maka ụmụaka na-enyocha mba dị iche iche. Ị maara na Yerevan bụ isi obodo Armenia ma ọ bụ na Paramaribo bụ isi obodo Suriname? Isiokwu a nwere ike inyere gị aka ịmatakwu na ị maara obodo ukwu dị mkpa.
Ihe niile gbasara Geography nke anụ ahụ
Akụkụ nke anụ ahụ bụ alaka nke sayensị nke ọtụtụ ndị maara. Ọ na-agụnye ọmụmụ banyere climates, osisi na ugbo, ikuku, ihe ndị dị n'akụkụ ala, mmiri ọkụ, na ihe ndị ọzọ. Isiokwu a na-enye nkọwa nke ọdịdị mbara igwe na-enye ọtụtụ njikọ maka ịmatakwu ihe ọmụma.
Ihe niile banyere ọdịdị ọdịbendị omenala
Geography abughi banyere ugwu, ozu mmiri, na ihe ndi ozo nke uwa.
Na isiokwu a, ị ga-amụ banyere akụkụ mmadụ nke geography - esi asụ asụsụ, akụnụba, ụlọ ọrụ gọọmentị, na ọbụna nkà jikọtara ya na ọdịdị anụ ahụ nke ụwa anyị.
Echere m na ihe ndị a na-enyere gị na ụmụ gị aka ịmụta ọdịdị ala!
E bipụtara ma gbasaa isiokwu a site na Allen Grove na November, 2016
Ụkpụrụ National Geography
Ndi umunwanyi ndi na-acho ihe ojoo?
Mba na-eji Euro dị ka ego ha
Ihe ndi ozo nke uwa
Enweghị Ngalaba Ntugharị Na-ahụbeghị Na United States
Geography nke Equator Ụwa
Echiche Ụgha - Ndị Na-ekweghị na Chineke Bụ Ndị nzuzu Na-ekwu "Ọ Dịghị Chineke"
Ihe E Ji Eji Eji Mee Ihe
Nzukọ Ọgbakọ nke Chọọchị LDS (Mormon) bụ Akwụkwọ Nsọ nke Oge
Ihe Odide Gbasara Akara nke Agha Ụwa M
Top Rod Stewart Solo Songs nke '80s
Esi egwu Play Cornerback
Gịnị Ka Oké Osimiri Na-eri?
Ihe kacha elu 10 Ihe Ịmata Banyere Rutherford B. Hayes
GPA Gọọmenti Gọọmentị, SAT na ACT Data
Gịnị Bụ Julia Roberts '10 Movies Kasị Mma?
6 Ekpere Ụmụaka
Chester A Arthur: Onye isi iri abụọ na mbụ nke United States
Ndi Abasi Ẹfep ke Ufọkn̄wed Ufọk Ufọk?
Egwuregwu Quadratic Egwuregwu site na-emekọ Ihe Odide Square
Nkume Ejiji: Nzọụkwụ site Nzọụkwụ Nzọụkwụ
Uzo iri abuo na eme ememe ncheta ulo
Akwukwo ihe omuma nke Asia American Black Panther Richard Aoki
Berry College GPA, SAT na ACT Data
Ụlọ akwụkwọ University Clemson
Nyochaa: Cooper CS5 Grand Touring
Elvis Presley usoro iheomume: 1954
Na-ekwu okwu na Spanish G na J
N'ebe a bụ ihe ndị bụ isi nke iwu ikpebi maka ndị nta akụkọ
Ndị isi oche ndị na-eche maka president na ndị furu efu
Agha Vietnam: Fall nke Saigon